ပွတ်တိုက် Stir ဂဟေ (FSW) | ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ - essai
နေအိမ်> ပွတ်တိုက် Stir ဂဟေ (FSW)
ပွတ်တိုက် Stir ဂဟေ (FSW)သည်အဆင့်မြင့် solid-phase ဂဟေဆော်သည့်နည်းပညာဖြစ်သည်။ ဂဟေဆော်နေစဉ်အပူအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်၊ သတ္တုအရည်သည်အရည်ပျော်။ ဒြပ်စင်လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိ။ ထိုကဲ့သို့သောလူမီနီယမ်, မဂ္ဂနီစီယမ်, သံမဏိ, တိုက်တေနီယမ်နှင့်သတ္တု matrix ကိုပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများအဖြစ်သတ္တုပစ္စည်းများအရည်အသွေးမြင့်ဆက်သွယ်မှုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ထွန်းသစ်စစက်မှုလုပ်ငန်းများ၌အထူး CNC ပြုပြင်ခြင်း (ပွတ်တိုက်အားဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဖုန်စုပ်ခြင်း)၊ ပွတ်တိုက်ဂဟေဆော်စက်၊ ရေခဲတုံးစီးခြင်းနှင့်အထူးဂဟေဆော်ခြင်းနည်းပညာအသုံးချခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့တွင်အဓိကပါဝင်သည်။ ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်စုစုပေါင်းဖြေရှင်းချက်ပေးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ရှန်ကျန်းတွင်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုရှိသည်။
Green energy-saving LED working lighting device.
Widely used in scientific research and various industries:
1. Automotive industry: aluminum alloy wheels, battery trays, water-cooled sleeves, rear axles, car body panels, stitched blank car bodies, aluminum foam structures, etc.
2. Power electronics industry: finned radiators, liquid-cooled radiators, heat sinks, water-cooled plates, water-cooled boxes, etc.
3. Train industry: vehicle body, sidewall, floor, roof, bolster, coupler, etc.
4. Weapon industry: torpedo barrel, missile shell, armored body, and integrated display terminal, etc.
5. Smelting industry: cathode conductive beam, cathode plate, anode plate, etc.
Related Documents: ပွတ်တိုက် Stir ဂဟေ
နှစ်ပေါင်းများစွာရှာဖွေတူးဖော်ပြီးစုဆောင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ရာပေါင်းများစွာသောရောနှောနေသောခေါင်းများ၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းများ၊ မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းများ၊ ကြေးနီအလွိုင်းများနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်အလွိုင်းသံမဏိနှင့်တိုက်တေနီယမ်သတ္တုပစ္စည်းအချို့ကိုဂဟေဆော်ရန်သင့်တော်ပါသည်။ ဂဟေပုံစံများတွင်ပြားချပ်ချပ်ဖြောင့်ချုပ်ရိုး၊ လေယာဉ်နှစ်ရှုး၊ ဆလင်ဒါစက်ဝိုင်းချုပ်ရိုး၊ ဆလင်ဒါ longitudinal ချုပ်ရိုး၊ ဂဟေဆော်ခြင်းပုံစံများတွင်တင်းပါးဆုံရိုး၊ ရင်ပေါင်တွဲစပ်မှုစသည်တို့ပါဝင်သည်။ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ တင်းပါးဆုံချက်၊ မညီမျှသောအထူဂဟေဆော်ခြင်း၊
ရောနှောထားသော ဦး ခေါင်းသည်စျေးကွက်တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသုံးပြုရန်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားသည့်သုတ်ထားသောအရောအနှောဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကဖောက်သည်များမှာရေရှည်တည်ငြိမ်သောဂဟေထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်၏ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုသည်ရောနှောနေသောခေါင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့အသုံးပြုမှုအခြေအနေများသည်လည်းသိသိသာသာမပြောင်းလဲပါ။ စံပုံစံရောနှောထားသော ဦး ခေါင်း၏အသုံးချနယ်ပယ်များတွင်စွမ်းအင်ယာဉ်အသစ်များ (ဘက်ထရီဗန်း၊ ဘက်ထရီ၊ ရေအေးပြား၊ ရေတိုင်ကီ၊ အချက်အချာ)၊ ရထားရထား (ကားကိုယ်ထည်၊ ဘေးနံရံ၊ ကြမ်းပြင်၊ ခေါင်မိုး၊ အိပ်စက်ရောင်ခြည်၊ ။ ), လျှပ်စစ်အီလက်ထရောနစ် (fin radiator, အရည် - အအေး radiator, အပူနစ်, etc)
အမှတ်စဉ်နံပါတ် သက်ဆိုင်သောဂဟေပစ္စည်းများ သက်ဆိုင်သောဂဟေဝိသေသလက္ခဏာများ သက်ဆိုင်သောဂဟေပုံစံ ဂဟေအထူ ထုတ်ကုန်များအတွက်သင့်လျော်သော အများဆုံးဂဟေ
1 လူမီနီယမ်အလွိုင်း Flat seam
ဆလင်ဒါ၏ longitudinal joint Docking
နှစ်ဖက်ဂဟေဆော်ခြင်း 1 ～ 60mm ဘက်ထရီဗန်း
Box ထုတ်ကုန်များ ၃.၀ မီတာ / မိနစ်
2 မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ် 1 ～ 20mm ၂.၀ မီတာ / မိနစ်
3 ကြေးနီအလွိုင်း 1 ～ 15mm ၁.၀ သန်း / မိနစ်
4 ခဲသတ္တုစပ် 1 ～ 30mm ၁.၀ သန်း / မိနစ်
5 စတီးသံမဏိ 1 ～ 10mm 0.5m / min